Nomad Anotangisa maviri Matsva Ematehwe Ematehwe eApple Tarisa | Ndinobva mac
Nomad ndeimwe yemafemu ayo nguva pfupi yadarika anga achigadzira zvakanaka kwazvo zvishandiso zveApple zvishandiso. Mune ino kesi, ivo vachangobva kuburitsa yavo nyowani yemvura-inodzora matambo ematehwe evashandisi veApple Watch, the «Active Straps» Uye chokwadi ndechekuti senge zvimwe zvese zvigadzirwa zvavanazvo mukatalog yavo, tambo idzi dzinotaridzika.
Chinhu chakanaka pamusoro paNomad ndechekuti isu tatoona zvimwe zvigadzirwa zvefirm pane ini ndiri kuMac uye tinogona kuzvisimbisa izvozvo izvi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kwazvo nemutengo usiri wakachipa chaizvo, asi unovawo wakasungwa zvakanyanya kufunga nezvehunhu hwechigadzirwa.
Anoshanda Matambo eApple Tarisa 42mm uye 44mm
Iyo tambo nyowani yakatangwa naNomad inopa maviri saizi sarudzo dzaunosarudza kubva, mune chero zvadzinoita iwo anoenderana mabhande neayo 42 uye 44 mm Apple Watch. Zvakare chimwe chinhu chinonakidza kwazvo chatinowana mumabhande aya ndechekuti zvakagadzirwa Heinen dehwe kubva kuGerman uye anodzora mvura. Saka hatifanirwe kunetseka nezvekuvanyorova nekuti hapana chinozoitika kwavari. Ivo vanotiyeuchidza nezveRugged iPhone kesi dzavanadzo mune yavo yakakura chigadzirwa katarogu.
Iyo bhureki rakagadzirwa nesimbi isina chinhu uye ine yechinyakare tambo fomati, zvakare muchikamu chepazasi chetambo vane ma grooves anotadzisa mvura kuti isare uye iome nekukurumidza. Muchidimbu, isu takatarisana nemhando nyowani yemabhande anozoshandira vese vashandisi vasingade kuita vasina ganda paApple Watch yavo asi vasina hanya navo. Aya mamodheru matsva akatengwa pamadhora makumi manomwe uye anogona kuwanikwa zvakananga paNomad webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nomad anotangisa maviri matsva ematehwe ematehwe eApple Watch
Ungachinja sei mbeva kana trackpad kumhanya pane macOS